Abavelisi beebhakethi base China kunye nabathengisi | Dongheng Oomatshini
Iimpawu zethu emele lokuxhuba
I-emer mixer ye-emele ineemodeli ezi-2 ezifanelekileyo iskid steer kunye nomlayishi we-backhoe njl njl.
IBERERER mixer emele isebenzisa itywina elinemigangatho emininzi ukuthintela eludakeni.Ngale ndlela, ixesha lokuphila liya kuba lide.
Xa kuvulwa ngesanti kubunzulu baphantsi kwezantsi kwebhakethi lokuxuba kunye nombhobho okhutshelwayo wokukothula, uya kuba nolawulo lwe-maxium ngokulula kugalelwe nganye.
NXIBA IZINTO EZIMELAYO
Ibhakethi kunye nebreyidi evuselelayo yenziwe ngezinto ezingagungqiyo ezinamandla, ezenza ukuba kube nzima ukunxitywa ngexesha lokusebenza.
Umgangatho ophezulu wevaluva zokulawula kunye neekiti zonxibelelwano zombane ngaphakathi zenza ibhakethi le-KINGER lokuxuba libonisa ukusebenza kakuhle ekuveliseni umsebenzi oqinileyo.
Siyayamkela intlawulo ngeT / T, ikhadi lamatyala, iWest Union, iMoneyGram, iL / C njl.
Ukuba iodolo iphantsi kwe-10pcs, sinokuhambisa iimpahla kwiQingdao Port zingaphelanga iintsuku ezili-15 emva kokufumana intlawulo.Ukuba ngaphezulu kwe-20opcs, sihambisa iimpahla zingaphelanga iintsuku ezingama-30 emva kokufumana intlawulo. .
Senze iziqhotyoshelweyo ze-excavator ngaphezulu kweminyaka eli-10 Zonke iimveliso zethu zifumana ifom ye-CE kunye nesatifikethi se-ISO ngomgangatho ophezulu kunye nozinzo.Kwakhona, samkela i-OEM.
U-KINGER uneqela le-R & D eliqinileyo, inkonzo yokuthengisa ngaphambi kokuthengisa, emva kwenkonzo yokuthengisa. Ngokweemfuno zabathengi, sinokubonelela ngeseti epheleleyo yezisombululo.
Nasiphi na isidingo onokuba naso uya kufumana impendulo ekhawulezileyo kwi-KINGER.
I-KINGER Concrete Mixer iBucket eqhotyoshelweyo ngokulula ithatha ubunzima ekuveliseni umsebenzi oqinileyo, oza ngobukhulu obubini ukugcina ixesha lakho lomsebenzi kunye nemodeli yethu ekwazi ukuxuba kunye nokuhambisa ukuya kwi-300L ikhonkrithi kumthwalo omnye. ipleyiti yeadaptha edibeneyo ukuze ilingane naziphi na iimveliso ze-skid steer.As ukuya kwi-backhoe loader, singenziwa njengobungakanani bakho ukulungiselela umatshini wakho.
Ngasentla isikhombisi sokuxuba sebhakethi yesalathiso sakho.Ingafakwa kuzo zonke ii-skid steer kunye ne-backhoe loaders.Nayo nayiphi na imibuzo yamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi.
Egqithileyo Isicwangciso somthi
Okulandelayo: I-auger yomhlaba